पाकिस्तान, ५ फागुन । पाकिस्तानको एक अदालतले शनिबार एक व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिएको छ । सो अदालतले ती व्यक्तिलाई चार पटकसम्मको फाँसीको सजाय सुनाएको थियो । एक बालिकाको बलात्कार र त्यसपछि हत्या गरेको आरोपमा फाँसी दिइएको थियो ।
इम्रान अलि नामक २४ वर्षीय यी व्यक्तिले छ वर्षीया एक बालिकालाई बलात्कार गर्नुका साथै उनको हत्या गरेका थिए । शहरको पूर्वी भागमा छ वर्षीया जाइनाब फतिमा नाम गरेकी ती बालिकाको गत महिना बलात्कार र हत्या भएको थियो । फाँसीको सजाय पाएका ती व्यक्तिलाई पञ्जाव शहरमा कम्तीमा सात बालिकालाई आक्रमण गरेको र हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । तीमध्ये पाँच बालबालिकाको हत्या गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
अलिलाई छुट्टाछुट्टै चार वटा आरोपको मृत्युदण्डको सजाय भएको थियो । जाइनाबको बलात्कार र हत्यालगायत अलिलाई आतङ्ककारीवादको समेत आरोप पञ्जाव प्रान्तका न्यायाधीश इहतेशाम कादिरले बताउनुभएको थियो ।
प्रकाशित : आइतबार, फागुन ०६, २०७४१०:१८
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अस्पतालमा निधन भन्दै भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने मानन्धर पक्राउ !
आज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सीमरा प्रस्थान गर्ने ! यस्तो छ कार्यक्रम !
अमेरिकासँग तालिबानले वार्ता गर्ने ! तालिबानका सहसंस्थापक बरादरको नेतृत्वमा टोली गठन !
चलचित्र राजारानीको प्रीमियर शोमा देखिए एमाले नेता लालबाबु पण्डितदेखि गौरीमल्लसम्म [तस्विर]
भुतप्रेत भगाउने भन्दै बालक माथि तातो पन्यु प्रहार, तीन पक्राउ !
५५ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका